ဘုရားစွန့်ပစ်ခြင်းခံသောကယ်တင်ရှင် | The God-Forsaken Saviour | Real Conversion
၂၀၁၂၊ ဧပြီလ၁ရက်နေ့၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင် ဘုရားနေ့၊ နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
“သုံးချက်တီးအချိန်၌ ယေရှုက၊ ဧလိ၊ဧလိလာမာရှာဗခသာနိဟုကြီးစွာသော အသံနှင့်ကြွေးကြော်တော်မူ၏။ အနက်ကားအကျွန်ုပ်၏ဘုရား၊အကျွန်ုပ်၏ ဘုရား အဘယ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်စွန့်ပစ်တော်မူသနည်းဟုဆိုလိုသတည်။ (ရှင်မဿဲ၂၇း၄၆)။
ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်အမှောင်ထုည၌ ဆုတောင်းခြင်းအပြီးတွင်၊ “ယဇ်ပုရောဟိတ်အ ကြီးနှင့်ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်အကြီးတို့အဖွဲ” ရောက်ရှိလာပြီး ယေရှုကိုဖမ်းဆီးချည်နှောင်ခဲ့ကြ သည်။ ထိုသူတို့သည်၊ “မီးအိမ်၊မီးရှုး၊ လက်နက်တို့ကိုလက်စွဲလျှက်လာကြ၏”(ယောဟန် ၁၈း၃)။ ယေရှုကို ဖမ်းဆီးကြပြီး၊ “ကျမ်းပြုဆရာ၊ လူအကြီးအကဲများစည်းဝေးရာယဇ်ပု ရောဟိတ်မင်းကာယဖထံသို့ ဆောင်သွားကြ၏”(မဿဲ ၂၆း၅၇)။ ထိုသူတို့သည် ယေရှုကို တရားစွပ်စွဲကျိန်ဆဲကြ၏။ ယေရှုအားတံထွေးနှင့်မျက်နှာကိုထွေးကြ၏။ လက်သီးဖြင့်ထိုး ကြ၏။ လက်ဝါးဖြင့် ရိုက်ကြ၏မုတ်ဆိတ်ကို ဆွဲနုတ်ခဲ့ကြသည်။ (ဟေရှာ ၅ဝး၆)။
နောက်တနေ့နံနက်တွင်၊ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်အကြီးတို့သည် အသေသတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြသည်။ ထိုသူတို့က ယေရှုအားချဉ်နှောင်ကြပြီး၊ ရောမဧကရာစ်မင်းပုန္တိပိလတ်မင်းထံ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြသည်။ ပိလတ်မင်းကမေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့သည်။ ပိလတ်မင်းက လူအုပ် ကြီးတို့အား “ခရစ်ဟုခေါ်ဝေါ်သောယေရှုကို အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်း?ဟု မေးမြန်သော်၊ ထိုသူအပေါင်းတို့က၊ သူသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားခြင်းကိုခံပါလေစေဟုဆိုကြ ၏”(မဿဲ ၂၇း၂၂)။ ထိုနောက်ပိလတ်မင်း ယေရှုအားရိုက်နှက်စေလျှက်၊ ကားတိုင်ပေါ်အ သေသတ်စေခဲ့၏။ ရောမစစ်သားတို့က၊ ယေရှုအားသွေးထွက်သည့်တိုင်အောင် ကျူလုံး ဖြင့်ရိုက်နှက်ခဲကြသည်။ ဆူးဖြင့်ယက်သောဆူးရစ်သာရဖူကို အတင်းဆောင်းစေခဲ့ကြ သည်။ ကျူတစ်လုံးကိုလည်း လင်္ကျာလက်တော်နှင့်ကိုင်စေပြီ “ရှေ့တော်မှာ ဒူးထောက် လျှက်၊ယုဒရှင်ဘုရင်၊ ကိုယ်တော်သည် မင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟူ၍ ကိုယ်တော်ကိုပြက်ရယ် ပြုကြ၏” (မဿဲ ၂၇း၂၉)။ လက်သီးဖြင့် ထိုးနှစ်ကြပြီး၊ ကျူလုံးဖြင့်ခေါင်းကိုရိုက်ခဲ့ကြ သည်။ ထိုသူတို့သည် ကိုယ်တော်အားပြက်ရယ်ပြုကြသည်နောက် မင်းဝတ်လုံကိုချွတ်၍ သူ့အဝတ်ကို ဝတ်စေပြီးလျှင်၊လက်ဝါးကားတိုင်မှာ ရိုက်ထားခြင်းငှါ၊ ထုတ်သွားကြ၏။
ယေရှုသည် လက်ဝါးကားတိုင်ကို ထမ်းခဲ့သည်။ ထိုကားတိုင်သည် လေးသော ကြောင့်လဲကျခဲ့ရ၏။ ထိုနောက်ရောမစစ်သားတို့က ရှိမုန်အမည်ရှိသော ကုရေနေပြည် သားတစ်ယောက်အား ဖမ်းဆီး၍ ယေရှုနောက်၌ လက်ဝါးကားတိုင်ကို ထမ်းစေကြသည်။ ဂေါလ၊ဂေါသအရပ်သို့ ရောက်သောအခါ၊ ယေရှုအားပုံးရည်ကို ကပ်ပေးကြ၏။ ရောမစစ် သားတို့ကယေရှု၏ခြေ၊ လက်တို့၌ သံမှိုစွဲလျှက် သစ်တိုင်ပေါ်ရိုက်ထားကြ၏။ ထိုနောက် ကားတိုင်ကိုဆွဲထူလျှက်၊ မတ်တပ်ရပ်စေကြပြီး “ပြက်ရယ်ပြု၍၊ ထိုင်လျှက် ယေရှုအား စောင့်နေကြ၏။ (မဿဲ ၂၇း၃၆)။
õဤသူသည် ယုဒရှင်ဘုရင်ယေရှုပေတည်းဟု ရေး၍ခေါင်းပေါ်မှာ ကမ္ဗည်းတပ်ကြ ၏။ ဘယ်ဖက်သူခိုးတစ်ယောက်နှင့် ညာဘက်သူခိုးနှစ်ယောက်တို့၏ကြား၌ ကားတိုင်a ပါ်အသေခံစေကြ၏။လမ်းသွားလမ်းလာသော သူတို့ကလည်း “ဘုရားသခင်၏ သား တော်မှန်လျှင်၊ လက်ဝါးကားတိုင်မှဆင့်လော့” (မဿဲ၂၇း၄၀) ဟူ၍ခေါင်းညိတ်လျှက် ကဲ့ရဲ့ကြ၏။ ယဇ်ပုရောဟတ်အကြီးတို့ကလည်း “ဤသူသည်သူတပါးတို့ကို ကယ်တင် တတ်၏။ ကိုယ့်ကိုကို မကယ်တင်နိုင်ပါတကား”ဟူ၍ ကဲ့ရဲ့ကြ၏။ ဣသရလရှင်ဘုရင် မှန်လျှင် လက်ဝါးကားတိုင်မှ ယ္ခုဆင်းပါလေစေ။ ဆင်းလျှင်ငါတို့ယုံကြည်ကြမည်”(မဿဲ ၂၇း၄၂) ဟူ၍ ကဲ့ရဲ့ခဲကြသည်။
ယေရှုသည်နံနက်၉နာရီခန့်တွင် ကားတိုင်ပေါ်တင်သတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ မွန့်တည့်၁၂ နာရီမှမွန်းလွဲ၃နာရီအထိအမှောင်ထု လွမ်းမိုးခဲ့သည်။ မွန်းလွဲသုံးနာရီတွင် ယေရှုသည် ကြီးစွာသော အသံလွှင့်လျှက် “ဧလိ၊ဧလိ၊လာမာရှာဗခသာနိဟု ကြီးသောအသံဖြင့် ကြွေးကြော်တော်မူ၏၊ အနက်ကားအကျွန်ုပ်၏ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်၏ဘုရားအဘယ်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကို စွန့်ပစ်တော်မူသနည်း?ဟုဆိုလိုသည် (မဿဲ ၂၇း၄၆)။ “လက်ဝါးကားတိုင် တော်သည် သခင့်ရဲ့သရဖူဖြစ်သည်”ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကိုသီဆိုပါသည်။
ယေရှုက “အကျွန်ုပ်၏ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်၏ဘုရားအဘယ်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ် တော်မူသနည်း?ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ ကားတိုင်ပေါ်၌ အကြောင်းအရာသုံးမျိုး အတွက်ကြွေးကြော် ခဲ့သည်။
၁။ ပထမ၊ယေရှုဘုရားကားတိုင်ပေါ်ငိုကြွေး၊ ကြွေးကြော်ခြင်းသည် ဓမ္မဟောင်းပရော ဖက်ပြုချက်များပြည့်စုံဖို့ရန်ဖြစ်၏
“အကျွန်ုပ်၏ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်၏ဘုရား အဘယ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကို စွန့်ပစ် တော်မူသနည်း? (ဆာလံ ၂၂း၁)
ယေရှုသည် ချွက်ယွင်းချက်မရှိဘဲ၊ သမ္မကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်တို့ကို ပြည့်စုံစေသူ ဖြစ်သည်။ ဆာလံ၂၂၌ ဖေါ်ပြသော ၁၅ချက်ကို ကားတိုင်ပေါ်ယေရှုပြည့်စုံစေခဲ့ပါသည်။ ကနဦး၊အသင်းတော်စာရေးဆရာများက၊ ဆာလံ၂၂ကို “၁၅ချက်ပြည့်စုံသော ဧဝံဂေလိသ တင်းကောင်း”ဟူ၍ ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ဆာလံ၂၂း၁၈၌ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “အကျွန်ုပ် အဝတ်ကို အချင်းချင်းခွဲဝေ၍ အကျွန်ုပ်အင်္ကျီကို စာရေးတံချကြ၏”ဟူ၍ ကျမ်းစာလာ၊ ပ ရောဖက်ပြုချက်တို့သည် ရောမစစ်သားတို့က၊ ကားတိုင်ခြေရင်း၌ ယေရှု၏ဝတ်လုံကို စာရေးတံချကြခဲ့သည်။ ဆာလံ ၂၂း၁၆၌ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “အကျွန်ုပ်၏ခြေလက်တို့ ကို ထိုးဖေါက်ကြပါပြီ”ဟူ၍လာပါသည်။ ဟေဗြဲဘာသာစကားအရ “ထိုးနက်”ထိုးဖေါက် “ပေါက်အောင်ဖေါက်သည်”ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ပါသည်။ (Jသ့ည Gငူ). ဇာခရိ ၁၂း၁၀၌ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “သူတို့သည် မိမိတို့ကိုထိုးဖေါက်သော ငါ့ကိုရှုမြင်ရကြ လိမ့်မည်”ဟူ၍ ကျမ်းစာလာပါသည်။ ဟေဗြဲဘာသာစကားတွင် “ချွန်သောအရာဖြင့် ထိုး သည်၊ ထိုးဖေါက်သည်၊ ခွန်အားဖြင့် အသင်းထိုးသွင်းသည်။” (အထူးသဖြင့်) ဟူ၍အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ စကောဖီးလ်ကျမ်းစာ၌ ဆိုထားသည်မှာ၊
ဆာလံ၂၂သည်ကားတိုင်ပေါ် အသေခံခြင်း၏ ပုံရိပ်ဖြစ်ပါသည်။ အရိုးဆိုရာ တွင်(လက်၊လက်မောင်းပခုံးနှင့်အရိုးကွင်း)အဆစ်တို့ဖြစ်သည်။ အငယ်၁၄၌ ပြင်းထန်သောခံစားမှုကြောင့် သွေးမြောက်များစွာထွက်လာသည်။ အငယ် ၁၄၌ စိတ်နှလုံးတုန်လှုပ်ခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားလာခြင်းဖြစ်သည် အငယ်၁၄၌ ချွေးထွက်များ၍ ဆာငတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အငယ်၁၅၌ ခြေလက်တို့ကို ထိုးဖေါက်ခဲ့ကြသည်။ အငယ်၁၆၌ အဝတ်ချည်စည်းရိုက် သည့်နာကျင်ခြင်း၊ အခန်းငယ်၁၇၌၊ ရည်ရွယ်မထားသောသေခြင်းဖြစ်သည်။ အခြေအနေတရပ်အတွက် ခရစ်တော်၏ကားတိုင်ပေါ်အသေခံခြင်းဖြင့်သာ ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည် အထီးကျန်စွာငိုကြွေးခြင်း အငယ် ၁သည်(မဿဲ၂၇း၄၆) ၌ ပြည့်စုံသည်။ အငယ်၂၌ အမှောင်အလင်းကို ပြောခြင်းသည် (မဿဲ ၂၇း၄၅)၌ ပြည့်စုံပါသည်။ အငယ်၁၈၌ပါ အကြောင်းအရာကို (မဿဲ၂၇း၃၅) တွင် ၎င်းပြည့်စုံစွာဖေါ်ပြထားပါသည်။ ကားတိုင်ပေါ်ရက်စက်စွာ အသေခံ စေခြင်းပြစ်ဒဏ်သည်၊ ရောမလူမျိုးတို့၏ အစက်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ဖြစ်သည် ဂျူးလူမျိုးတို့၏ ပြစ်ဒဏ်မဟုတ်ပါ။ (The Scofield Study Bible, p. 608; note on Psalm 22).
ဆာလံ၂၂သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်၊ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေ ခံရန် အံ့ဩဖွယ်ပရောဖက်ပြုချက်ဖြစ်သည်ဟုဆို၏။ ဤဆာလံကျမ်းကိုခရစ် တော်ဘုရားကားတိုင်ပေါ် ဝေဒနာမခံမှီနှစ်၁၀၀၀အလိုတွင် ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ် ပြီး၊ ကားတိုင်ပေါ်အသေခံရန်နည်းလမ်းဥပဒေသည် ထင်ရှားစွာဖေါ်ပြပြီးဖြစ် ပါသည်။ (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender's Study Bible, World Publishers, 1995 edition, p. 608; note on Psalm 22:1).
ဒေါက်တာဂျွန်အာရ်ရိုက်စ်က ယေရှုကားတိုင်ပေါ်အသေခံခြင်း ပရောဖက်ပြုချက်တို့ ပြည့်စုံပြီးနောက်၊ နောက်ထပ်ပရောဖက်ပြုချက်တစ်ခုကို ပြုစုထားသည်။ ထိုသူပြောကြား ခဲ့သည်မှာ “မတော်တဆကျမ်းစာ စကားပြည့်စုံလာခြင်းဟူသည် မဖြစ်နိုင်ချေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၌ ခိုင်လုံသော၊ သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းထားခြင်းနှင့် ခရစ်တော်ယေရှု အကြောင်းအရာများစွာ သက်သေရှိနေပါသည်။ (လုကာ၂၄း၂၅-၂၇)။ မိုက်မဲသောသူတို့ သာလျှင် မယုံကြည်နိုင်ခြင်းဖြစ်၏။ များစွာသော ပရောဖက်ပြုချက်ပြည့်စုံခြင်း သမ္မာ ကျမ်းစာ၌ရှိနေပါသည်။ ဤအရာများအားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏စိတ်နှလုံးတော် ပင်ဖြစ်ပါသည်”။ (John R. Rice, D.D., The Bible Garden, Sword of the Lord Publishers, 1982, p.31).
၂။ ဒုတိယ၊ယေရှုကားတိုင်ပေါ် အောဟစ်ကြွေးကြော်ခြင်းသည် အပြစ်သားတို့၏ ငရဲ့၌ ပြင်းထန်စွာ ခံစားမှုပုံရိပ်ပင်ဖြစ်သည်။
“အကျွန်ုပ်၏ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်၏ဘုရား အဘယ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကို စွန့်ပစ် တော်မူသနည်း? (မဿဲ ၂၇း၄၆)။
ယေရှုသည် ငရဲ့ထဲသို့သွားရောက်ခြင်းမရှိဘူးဟူသော ဒေါက်တာပရိက်ဒရိတ်ကေ၏ သွန်သင်ချက်လို အမှတ်ရကြည့်ပါ။ ယေရှု “ငရဲသို့သွားရောက်ခံစားခြင်း” ဟူသောအ ထောက်အထားသမ္မာကျမ်းစာ၌ မရှိပါဟုဆို၏။
ဒေါက်တာဂျွန်အာရ်ရိုက် သွန်သင်ပြောကြားသကဲ့သို့ “အကျွန်ုပ်၏ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်၏ဘုရား၊ အဘယ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကို စွန့်ပစ်တော်မူသနည်း” ဤသည် အပြစ် သားတို့မီးငရဲထဲ၌ ဝေဒနာခံစားခြင်း ပုံရိပ်ပင်ဖြစ်သည်ဟူသော သွန်သင်ချက်ကို သဘော တူပါသည်၊ ဒေါက်တာရိုက်စ်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
ခရစ်တော်ဘုရားကားတိုင်ပေါ် ပြင်းစွာသောဝေဒနာခံစားခြင်းသည် အပြစ် သားတို့ ငရဲ့၌ဝေဒနာခံစားခြင်းကို နှိုင်းယှဉ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကားတိုင် ပေါ် ယေရှုဘုရားကြွေးကြော်သည်မှာ “ကျွန်ုပ်ရေငတ်၏ဟု မိန့်တော်မူပါ သည်။ (လုကာ ၁၆း၂၄)။ “ကျွန်ုပ်၏ဘုရား၊ကျွန်ုပ်၏ဘုရား အဘယ်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်တော်မူသနည်း?ဟူ၍ သူဌေးငိုကြွေးသံကို သင်မသိနိုင်၍သာ ဖြစ်မည်။ ငရဲသည်အမှန်တကယ်ရှိနေပါသည်။ kရားသခင်နှင့်ခွဲခါပြီးသော အခါ၊ သင်သည်ငရဲ၌ပြင်းထန်စွာ ငိုကြွေးရမည်၊ ပြင်းထန်သော ဝေဒနာခံစား ရမည်။ “အဘယ်ကြောင့်”? ဟူသော စကားကို အပြစ်သားတို့သည် ငရဲ၌သူ ကန်းကဲ့သို့၎င်း၊ လူဆိုးလူမိုက်ကဲသို့၎င်းမေးနေမည်။ (၁ကော၂း၁၄)။ ထိုကဲ သို့ စိတ်ခံစားချက်ကို ယုဒသည်သိနေသည်မှာ သန့်ရှင်းသောအသွေးကို သစ္စာဖေါက်မိပြီဟူသော အချက်ပင်ဖြစ်သည f(မဿဲ၂၇း၄)။ သို့ပါသော်လည်း မိမိ၏ အပြစ်မှပြန်လှည့်မလာခဲ့ပါ။ (Rငခနယ ငဘငိ.ယ စစ. ၃၁ယ ၃၂).
ယေရှုကားတိုင်ပေါ် အော်ဟစ်ကြွေးကြော်ခြင်းသည် အပြစ်သားများငရဲ၌ ပြင်းထန်စွာခံ စားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
“အကျွန်ုပ်၏ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်၏ဘုရားအဘယ်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်တော်မူ သနည်း? (မဿဲ ၂၇း၄၆)။
ငရဲထဲသွားရောက်မည့်၊ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် မျှော်လင့်ချက်ဟူ၍ မရှိတော့ပါ။ မယုံကြည်သောသူတို့၊ သေဆုံးသည့်အခါ မည်သို့ဖြစ်လာမည်ကို ယေရှုပြော ကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။ မိန့်တော်မူသည်မှာ၊
“ကျိန်ခြင်းကိုခံရသောသူတို့ မာန်နတ်နှင့်သူ၏ တမန်တို့၏အဖို့ ပြင်ဆင်သော ထာ၀ရမီးထဲသို့ ငါ့ထံမှခွါသွားကြလော့။ (မဿဲ ၂၅း၄၁)။
“မိုးမသေ၊ မီးမငြိမ်းရာငရဲအတွင်းမငြိမ်းနိုင်သောမီး” (မာကု ၉း၄၄)။
“မရဏာနိုင်ငံ၌ ပြင်းပြစွာသော ဝေဒနာကိုခံရလျှက်မျှော်ကြည့်၍” (လုကာ ၁၆း၂၃)။
ယေရှုခံစားခဲ့သော ပြင်းထန်သောဝေဒနာကို ခရစ်တော်ဘုရာအား ငြင်းဆန်သောသူတို့ သည် ထိုနေရာအရပ်သို့ သွားရောက်ဝေဒနာခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့၌ကုန် ဆုံးချိန်မရှိဘဲ “ထာ၀ရမီးငရဲ”၌ ဝေဒနာကိုခံစားရကြမည်။ (မဿဲ၂၅း၄၁)။ “အကျွန်ုပ်၏ ဘုရား၊ အကျွုန်ုပ်၏ဘုရား၊ အဘယ်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသနည်း? ဟူ၍ ငိုကြွေးအော်ဟစ်ကြပါလိမ့်မည်။ ခရစ်တော်ဘုရား၏ ခံရသောဝေဒနာများသည် အပြစ် သားတို့ ငရဲ၌ခံစားရမည့် ပုံရိပ်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အား ခရစ်တော်သခင်ကို ယခုပင်ယုံကြည်ကိုးစားပြီး၊ ကယ်တင်ခြင်းရယူဖို့ရန် သင့်အား တိုးလျှိုးတောင်းပန်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အချိန်မနှောင်းခင် သင်ယုံကြည်လက္ခံ လိုက်ပါ။
၃။ တတိယ၊ ယေရှုကားတိုင်ပေါ် ကြွေးကြော်အော်ဟစ်ခြင်းသည် အပြစ်သားများ၏ အပြစ်အတွက် ကိုယ်စားအသေခံခြင်းဖြစ်သည်။
“သုံးချက်တီးအချိန်၌ ယေရှုက၊ဧလိ၊ဧလိလာမရှာဗခသာနိဟု ကြီးစွာသောအ သံနှင့်ကြွေးကြော်တော်မူ၏။ အနက်ကား အကျွန်ုပ်၏ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်၏ ဘုရား၊ အဘယ်ကြောင့် အကျွန်ုပ်အား၊ စွန့်ပစ်တော်မူသနည်းဟု ဆိုလိုသ တည်း (မဿဲ ၂၇း၄၆)။
နားလည်၍ မရသောသခင်ရဲ့ ငိုကြွေးခြင်းအကြောင်းများစွာရှိနေပါသည်။ လုသာသည် သမ္မာကျမ်းကို အစာမသုံးဆောင်ပဲ ယေရှုဘုရားလှုပ်ရှားသွားလာခြင်း၊ ငိုကြွေးအော်ဟစ် ခြင်းအကြောင်း မည်သည့်၊ ဒီဂရီအတိုင်းအတာဖြင့် တိုင်းထွာမည်နည်းဟူသော ပြော စကားကိုသတိရနေမိသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ခမည်းတော်ဘုရား၊ သားတော်ဘုရား ဟူသော အကြောင်းအရာကို လူသားဉာဏ်ပညာအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ သိနားလည်ခဲ့ရပါ သည်။ မည်ကဲ့သို့ သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားက၊ ပထမပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကို စွန့်ပစ်ခဲ့သနည်း? နောက်တွင်၊ သူသည်အရှုံးပေးလိုက်ပြီး ဇနီးသားသမီးတို့နှင့် ညနေစာကိုအတူတကွ သုံးဆောင်ခဲ့ပါသည်။ (၁၆၀၁-၁၆၆၉ခုနှစ်) ပျူရီတန်ကျမ်းအနက်ဖွင့် သူဂျွန်ထရက်ပ်က ခရစ်တော်ဘုရား၏ ရင်နှင့်ဖွယ်ငိုကြွေးခြင်း အကြောင်းပြောကြားသည်မှာ၊ “ကျွန်ုပ်၏ ဘုရား၊ ကျွန်ုပ်၏ဘုရားဟု လူသားအနေဖြင့် ငိုကြွေးသည်၊ (အဘယ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကို စွန့်တော်မူသနည်း?) ဘုရားအနေဖြင့်၊ အမှားကျူးလွန်နေသောသူခိုးကို ပါရဒိသူဘုံကို ဖွင့်ပေးခဲ့၏။ (John Trapp, A Commentary on the Old and New Testaments, Transki Publications, 1997. reprint, volume V, p.276; note on Matthew 27:46).
ဒေါက်တာအာရ်.စီ.အိပ်ခ်ျလန်းစကီး (၁၈၆၄-၁၉၃၆) ပြောကြားခဲရာတွင်၊ သေလုဆဲ အော်ဟစ်ကြွေးကြော်သောအခါ၊ ဘုရားသည် ထိုသူအားမတွေ့မြင်တောပေ၊ ခွဲခွါခြင်း၏ အုတ်တံတိုင်းသည် ခမည်းတော်နှင့်သားတော်ကြားအပြစ်နှင့် ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာ၊ကခြား နားစေခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။ ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ကို ဆာငတ်တောင်းတခဲ့၏။ သို့သော် ဘုရားသခင်က၊ ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သားတော်ကခမည်းတော်ကို စွန့်ပစ်ခြင်း မဟုတ်ပါ၊ ခမည်းတော်ကစွန့်ပစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သားတော်သည် ကြီးစွာကြွေးကြော် သော်လည်း ခမည်းတော်ပြန်လည်၍မထူးခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း၊ သေခြင်းငရဲနှင့်ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာသည် ယေရှုအပေါ် လွှမ်းတော်မူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သားတော်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာကို ယူတင်တော်မူသောကြောင့် “ကျွန်ုပ်၏ဘုရား”ဟူ၍ ငိုကြွေးခဲ့သည်။ “ကျွန်ုပ်၏ခမည်တော်”ဟူ၍ မငိုကြွေးခဲ့ပါ။ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ကျွန်ုပ်၏ဟူသော စကားသည်အာခရာကျပါသည်။ သို့ သော်ငြားလည်း ဘုရားသခင်သည် မျက်နှာလွှဲတော်မူခဲ့သည်။ ငိုယိုပြီး ငြွဩွူ။ြွင၏ြွဘုရားဟု ရှေ့တိုးပြီးငို၍ခေါ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ ဤသည်တွင် ယေရှုဘုရား၏ပြီးပြည့်စုံခြင်းထင်ရှားနေပါ သည်။ အပြစ်ကင်းသော သိုးသူငယ်သည် အပြစ်သားနှင့်ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာကို ခံယူပြီး ကားတိုင်ပေါ် ယူဆောင်ခဲ့ပါသည်။ (R. C. H. Lenski, Ph.D., The Interpretation of St. Matthew's Gospel. Augsburg Publishing House, 1964 edition, pp. 1119-1120).
ဒေါက်တာရိုက်စ်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “အံ့ဩဖွယ်ရာယေရှုသည် အပြစ်သားကဲသို့ ဤလောက၏ အပြစ်ကို ယူတင်တော်မူခဲ့သည်” (Rငခနယ ငဘငိ.ယ စ. ၃၁). တမန်တော်ရှင်ပေါလု ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
“ခရစ်တော်သည် ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေခံတော်မူ ၏။ (၁ကော၁၅း၃)။
“ငါတို့သည်အပြစ်နှင့်ဆိုင်သော အရာ၌အသေဖြစ်၍ မတ်ခြင်းအရာ၌ အသက် ရှင်စေမည်အကြောင့် ငါတို့၏အပြစ်များကို ကိုယ်တာ်တိုင်သစ်တိုင်မှာ ခံတော် မူပြီ။ (၁ပေ ၂း၂၄)။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အစား၊ ယေရှုသည်အသေခံတော်မူခဲပြီဖြစ်သည်။ “ငါတို့အတွက် ကြောင့် ကျိန်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်၍” (ဂလာ ၃း၁၃)။
ယေရှုသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုသေခြင်းငရဲ့မှ ရွေးနုတ်ကယ်တင်လိုငှါ၊ ကားတိုင်ပေါ် အသေခံပေးဆပ်ခဲပြီဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲသို့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်က၊ ကျွန်ုပ်တို့အား ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ချစ်မေတ္တာကို တောင်းဆိုနေပါသည်။ ဒေါက်တာဝက်စ်ပြောကြားခဲ့ သည်မှာ၊ “အံ့ဩဖွယ်မေတ္တာ၊ ဘုရားမေတ္တာသင့်စိတ်ဝိညာဉ်၊ အသက်တာတခုလုံးအား တောင်းဆိုနေသည်” ယေရှုထံလှည့်ပြီး ယုံကြည်ကိုးစားလိုက်ပါ။ သင့်အား အပြစ်ဒဏ် စီရင်ခြင်းမှ ကယ်တင်ပါလိမ့်မည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာဂရိတန်အယ်လ်ချန်မှ ရှင်မာကု ၁၅း၂၄-၃၄ အထိကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ် ဂရိဖက်စ်မှ (၁၉၁၄-၁၉၉၃ အီရာ အက်ယ်စတက်ဖီးလ်) သီကုံးရေးသားသော “ဆူးရစ်သရဖူ ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးပါ သည်။
(ယောဟန် ၁၈း၃၊ ရှင်မဿဲ ၂၆း၅၇၊ ဟေရှာယ ၅ဝး၆၊ ရှင်မဿဲ ၂၇း၂၂၊
ဆာလံ၂၂း၁၊ ၁၈၊၁၆၊ ဇာခရိ ၁၂း၁၀။
၂။ ဒုတိယ၊ယေရှုကားတိုင်ပေါ် အော်ဟစ်ကြွေးကြော်ခြင်းသည် အပြစ်သားတို့၏ ငရဲ့၌ ပြင်းထန်စွာ ခံစားမှုပုံရိပ်ပင်ဖြစ်သည်။
လုကာ၁၆း၂၄၊ ၁ကော၂း၁၄၊ မဿဲ ၂၇း၄၊ မဿဲ ၂၅း၄၁ ၊ မာကု ၉း၄၄၊ လုကာ ၁၆း၂၃
၃။ တတိယ၊ ယေရှုကားတိုင်ပေါ်ကြွေးကြော်အော်ဟစ်ခြင်းသည် အပြစ်သား၏ အပြစ်အတွက် ကိုယ်စားအသေခံခြင်းဖြစ်သည်။
၁ကော ၁၅း၃၊ ၁ပေ၂း၂၄၊ ဂလာ ၃း၁၃။